ချစ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီလား?? » Today Bago
HomeLifestyleRelationshipချစ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီလား?? ချစ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီလား?? May 26, 20170comments Nandar Lwin Posted in Relationship0သူ့ရဲ့ ချိုသာတဲ့အပြုံးတွေ.. ကြင်နာတဲ့ စကားသံတွေ.. သူ့ရဲ့ ခိုင်မာတဲ့ ယုံကြည်ချက်တွေ.. မြင့်မြတ်တဲ့ စိတ်ထားတွေ..
ဘယ်အရာနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် သူ့မှာ ကိုယ်သဘောကျတဲ့ အရာတစ်ခုခု.. ဒါမှမဟုတ် ကိုယ့်ကို ဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့အရာတစ်ခုခု ရှိနေပြီဆိုရင်တော့ ကိုယ်သူ့ကို စိတ်ဝင်စားမိမှာပါပဲ.. ဒီလို စိတ်ဝင်စားမှုကို အစပြုပြီး ခင်မင်သိကျွမ်းမယ်.. ဒီကမှတစ်ဆင့် နှလုံးသားက အချက်ပြလာရင် ချစ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်မယ်..
ဒါနဲ့ပဲ အချစ်ရေးတစ်ခုကို တည်ဆောက်ကြတော့မယ်ပေ့ါ..
ချစ်စ၊ ခင်စမှာ သာယာစရာကောင်းသလောက် နောက်ပိုင်းလအနည်းငယ်အတွင်းမှာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်
မတူညီမှုတွေကို တွေ့လာရမယ်။ စိတ်သဘောမတွေ့တာလေးတွေ ရှိလာမယ်။ တစ်ယောက်ရဲ့
ပင်ကိုစိတ်နဲ့ သွင်ပြင်ကို တစ်ယောက် သိလာရမယ်။ (တစ်ယောက်အကြောင်းတစ်ယောက် သိလာတဲ့သဘောပေ့ါ။)
ဒီလို အခြေအနေမှာ ညှိနှိုင်းနိုင်မယ်.. တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် နားလည်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ ကာလရှည်လက်တွဲသွားဖို့
အဲဒီအချိန်မှာ သူ့ရဲ့ချိုသာတဲ့ အပြုံးတွေလည်း မရှိတော့ပါဘူး။ (ကိုယ် မခံစားတတ်တော့တာလည်း ဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါမယ်။)
သူ့ရဲ့ စကားသံတွေလည်း မကြင်နာနိုင်တော့ပါဘူး။ (ရန်စကားတွေတောင် ပါချင်ပါလာပါလိမ့်မယ်။)
တကယ်တော့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကြား အပေါ်ယံအရေခြုံမှုတွေ တစ်စထက်တစ်စ ပိုပြီးလျော့ပါးလာတာပါ။
စစ်တမ်းတွေအရတော့ ဒီလိုအခြေအနေကိုရောက်ဖို့ (တစ်ယောက်ရဲ့ ပင်ကိုစိတ်နေစိတ်ထားနဲ့ စရိုက်ကို သိရဖို့)
အချိန် လေးလကနေ ခြောက်လအထိ ကြာတတ်ပါတယ်။
စတွေ့ကာစမှာ ရင်ခုန်စရာကောင်းတဲ့အပြုအမူတွေနဲ့ ကြင်နာမှုတွေ၊ ချစ်စရာကောင်းခဲ့တာတွေကို အတည်မှတ်ယူလို့ လုံးဝ (လုံးဝ)
မရနိုင်ပါဘူး။ သူ့ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားနဲ့ အပြုအမူအမှန်တွေကို ခြောက်လ ကြာပြီးနောက်ပိုင်းမှ အကဲဖြတ်လို့ရပါမယ်။
ဒါကြောင့် ချစ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်တော့မယ်ဆိုရင် တဒင်္ဂအပြုအမူလေးတွေပေါ်မှာကြည့်ပြီး မဆုံးဖြတ်ပါနဲ့။
အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိ မပြောင်းလဲနိုင်ဘူးဆိုမှ ဒါဟာ သူ့ရဲ့ ပင်ကို စိတ်နေစိတ်ထားနဲ့ သင့်အပေါ်ထားတဲ့ ခံစားချက်အစစ်အမှန်ပါ။
Ref: Focus Youth E-magazine
သူ့ရဲ့ ခြိုသာတဲ့အပွုံးတှေ.. ကွငျနာတဲ့ စကားသံတှေ.. သူ့ရဲ့ ခိုငျမာတဲ့ ယုံကွညျခကျြတှေ.. မွငျ့မွတျတဲ့ စိတျထားတှေ..
ဘယျအရာနဲ့ပဲဖွဈဖွဈ သူ့မှာ ကိုယျသဘောကတြဲ့ အရာတဈခုခု.. ဒါမှမဟုတျ ကိုယျ့ကို ဆှဲဆောငျနိုငျတဲ့အရာတဈခုခု ရှိနပွေီဆိုရငျတော့ ကိုယျသူ့ကို စိတျဝငျစားမိမှာပါပဲ.. ဒီလို စိတျဝငျစားမှုကို အစပွုပွီး ခငျမငျသိကြှမျးမယျ.. ဒီကမှတဈဆငျ့ နှလုံးသားက အခကျြပွလာရငျ ခဈြဖို့ ဆုံးဖွတျလိုကျမယျ..
ဒါနဲ့ပဲ အခဈြရေးတဈခုကို တညျဆောကျကွတော့မယျပေ့ါ..
ခဈြစ၊ ခငျစမှာ သာယာစရာကောငျးသလောကျ နောကျပိုငျးလအနညျးငယျအတှငျးမှာ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ
မတူညီမှုတှကေို တှလေ့ာရမယျ။ စိတျသဘောမတှတေ့ာလေးတှေ ရှိလာမယျ။ တဈယောကျရဲ့
ပငျကိုစိတျနဲ့ သှငျပွငျကို တဈယောကျ သိလာရမယျ။ (တဈယောကျအကွောငျးတဈယောကျ သိလာတဲ့သဘောပေ့ါ။)
ဒီလို အခွအေနမှော ညှိနှိုငျးနိုငျမယျ.. တဈယောကျကိုတဈယောကျ နားလညျနိုငျမယျဆိုရငျတော့ ကာလရှညျလကျတှဲသှားဖို့
အဲဒီအခြိနျမှာ သူ့ရဲ့ခြိုသာတဲ့ အပွုံးတှလေညျး မရှိတော့ပါဘူး။ (ကိုယျ မခံစားတတျတော့တာလညျး ဖွဈကောငျးဖွဈပါမယျ။)
သူ့ရဲ့ စကားသံတှလေညျး မကွငျနာနိုငျတော့ပါဘူး။ (ရနျစကားတှတေောငျ ပါခငျြပါလာပါလိမျ့မယျ။)
တကယျတော့ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျကွား အပျေါယံအရခွေုံမှုတှေ တဈစထကျတဈစ ပိုပွီးလြော့ပါးလာတာပါ။
စဈတမျးတှအေရတော့ ဒီလိုအခွအေနကေိုရောကျဖို့ (တဈယောကျရဲ့ ပငျကိုစိတျနစေိတျထားနဲ့ စရိုကျကို သိရဖို့)
အခြိနျ လေးလကနေ ခွောကျလအထိ ကွာတတျပါတယျ။
စတှကေ့ာစမှာ ရငျခုနျစရာကောငျးတဲ့အပွုအမူတှနေဲ့ ကွငျနာမှုတှေ၊ ခဈြစရာကောငျးခဲ့တာတှကေို အတညျမှတျယူလို့ လုံးဝ (လုံးဝ)
မရနိုငျပါဘူး။ သူ့ရဲ့စိတျနစေိတျထားနဲ့ အပွုအမူအမှနျတှကေို ခွောကျလ ကွာပွီးနောကျပိုငျးမှ အကဲဖွတျလို့ရပါမယျ။
ဒါကွောငျ့ ခဈြဖို့ ဆုံးဖွတျတော့မယျဆိုရငျ တဒင်ျဂအပွုအမူလေးတှပေျေါမှာကွညျ့ပွီး မဆုံးဖွတျပါနဲ့။
အခြိနျအတိုငျးအတာတဈခုထိ မပွောငျးလဲနိုငျဘူးဆိုမှ ဒါဟာ သူ့ရဲ့ ပငျကို စိတျနစေိတျထားနဲ့ သငျ့အပျေါထားတဲ့ ခံစားခကျြအစဈအမှနျပါ။
အိမ်အကူမိန်းကလေးနှစ်ဦးကို ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုဖြင်...	May 26, 2017	0 comments ကိုယ့်ကလေးကို ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ ဘာမှမဖြစ်ခင်မှာ အချိ...	May 26, 2017	0 comments Share this 7SHARESFacebookTwitterGooglePinterestRedditTumblr